अन्तरीक्षमा पिज्जा पार्टी ! (भिडियो सहित) - नागरिक रैबार
वास्तवमा अन्तरीक्षयात्री बन्नु सबैभन्दा कठीन काम हो । किनकी आकासमा हजारौँ माइलको यात्रा गर्नु र अज्ञात चिज पत्ता लगाउनु सजिलो काम होइन । यद्यपि अन्तरीक्षमा यात्रा गर्नुको आफ्नै रोमान्चकता हुन्छ । हालै एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा अन्तराष्ट्रिय स्पेस स्टेसनका अन्तरीक्षयात्रीहरुले एक पिज्जा पार्टी गरिरहेका छन् ।
इन्स्टाग्राममा अपलोड भएको उक्त भिडियोमा अन्तरीक्षयात्रीहरुको एक टिम स्पेस स्टेसनमा पिज्जा डिनरको मज्जा लिइरहेको देखिन्छ ।
पृथ्वीभन्दा झण्डै ४ सय किलोमिटर टाढा रहेको इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा रहेका अन्तरीक्षयात्रीहरुले हावामा उड्दै रमाइलो तरिकाले पिज्जा खाइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । उक्त भिडियो थोमस पेस्क्वेटले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा अपलोड गरेका हुन् ।
भिडियोसँगै उनले लेखेका छन्- साथीहरुसँग तैरिने पिज्जा रात्री । यो तस्वीर पृथ्वीमा शनिवारको दिन हुने सप्ताहन्तको पार्टी जस्तै देखियो । जस्तो कि भनिन्छ एउटा उत्कृष्ट शेफ कहिल्यैपनि आफ्नो रहस्य उजागर गर्दैन । तर मैले एक भिडियो बनाएँ ता कि तपाइँहरुले हेरेरै बुझ्न सक्नुहोस् ।
करीब १ मिनेटको यो भिडियोमा अन्तरीक्षयात्री थोमसले आफ्ना सहकर्मीहरुसँग शुन्य गुरुत्वाकर्षणको वातावरणमा पिज्जा बनाएको र खाइरहेको देखिन्छ । त्यसक्रममा पिज्जाहरु हावामा उडिरहेको निकै रोचक दृश्य देखिन्छ । अन्तरीक्षयात्रीहरु निकै रमाइरहेका छन् सोसल मिडियामा यो भिडियो लाखौँ पटक हेरिसकिएको छ ।
हेलिकोप्टरमार्फत कोहलपुर लगिएकी महिलाको मृत्यु
हुम्लामा स्कुल खुलाउने अधिकार स्थानीय तहलाई
४ करोड ३० लाख वर्षअघि यस्तो हुन्थ्यो ह्वेल माछा !
आजभन्दा ४ करोड ३० लाख वर्षअघि पानी र जमिन दुवै ठाउँमा बस्न सक्ने ह्वेल माछा पाइन्थ्यो ।इजिप्टका वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययन अनुसार आजभन्दा ४३ मिलियन वर्ष अगाडि ह्वेलमाछा उभयचर प्राणीको रुपमा थियो । उसका चारवटा खुट्टा थिए ।यस्तो उभयचर ह्वेललाई इजिप्टमा मृत्युको देवता अर्थात् एनुबिसको नामले चिनिन्छ । तीन मिटर लामो ६ सय किलो तौल समाचार […]